Kismaayo News » Wasiiro la dhaariyay
Wasiiro la dhaariyay
Kn: Munaasabad ka dhacday xarunta Villa Hargaysa ayaa lagu dhaariyay sadexdii wasiir ee lagu badalay sadexdii la buriyay maalmo ka hor.
Wasiiradda cusub, Axmed Ciise Cawad, Cabdi Maxamed Sabriye iyo Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa lagu dhaariyay munaasab kooban oo ay goobjoog ahaayeen gudiyada joogtada ah ee Baarlamaanka federaalka iyo gudoonkooda.
Wasiiradan ayaa munaasabadda dhaarinta ka dhib kulan la qaatay ra’iisul wasaare Kheyre, asagoo kula dardaarmay inay isla maantaba hawlgalaan, dadka iyo dalkana ugu shaqeeyaan si xufan oo hagar la’aan ah.
Khamiistii aan soo dhaafnay ayay ahayd markii lagu waabariistay ceyrinta iyo magacaabista wasiirada lagu kala badalay sadexda jago ee maanta loo dhaariyay sadexda wasiir ee cusub taasi oo ahayd mid ay dadku la fajaceen maadaama ay ahayd arin ku cusub habdhaqanka siyaasadda Soomaaliya in wasiir la cayriyo asagoon ka warqabin.
Haatan xaaladdu waa falaadhii cirka loo ganay ninkastow filo, maadaama wasiiradu aysanba saadaalin karin cimrigoodana waxaa suuro gal ah inay taasi dhiirigaliso boobka hantida dadwaynaha.